SAR’nao: mampahafantatra ny « lehilahy » i Joël Pelerin | NewsMada
SAR’nao: mampahafantatra ny « lehilahy » i Joël Pelerin
Par Taratra sur 20/11/2019
Endrika hafa tanteraka no hampahafantaran’i Joël Pelerin ny atao hoe « lehilahy ». Saripika maromaro, arahina fanazavana amina soratra manana endrika tononkalo… Toa mipoitra tsikelikely ny maha lehilahy ny « lehilahy ».
Milaza hevitra mivantana, maneho ny ankolaka ihany koa ! « Lehilahy, iza moa ianao? ». Nezahin’i Joël Pelerin sy i Alice Ranorojaona-Pelerin,novalina io fanontaniana io, omaly, tetsy amin’ny AFT Andavamamba. Amin’ny alalan’ny saripika sy ny tononkalo mifandraika amin’izany no nisintonan’izy ireo ny eritreritr’izay mitsidika ny ranty, ao amin’ity toerana ity. Toa avoaka sy atsinkafon’ny ankamaroan’ireo saripika ny lehilahy sy ny momba azy. Ny lehilahy itoeran’ny hery. Manamarina izany ireo sarin-dehilahy rakotra valonan-kozatra. Ny lehilahy, ray vonona ny handray andraikitra na mbola any am-bohoka aza ilay menaky ny ainy. Ny lehilahy, sahy, masiaka, kanefa olon’ny fifanakalozan-kevitra ihany koa. Ny lehilahy, feno fahavononana hiatrika ny fiainana, sns. Ireo rehetra ireo, hamafisin’ny tononkalo nosoratan’i Alice Ranorojaona-Pelerin. Marihina fa nifanindran-dalana amin’ireo ny fanehoana filatroana nataona lehilahy maromaro naneho ny hakanton’ny endrika sy ny bika ary ny hatsaran’ny akanjo hanaovan’izy ireo.
I Joël Pelerin, dokotera mpitsabo, injeniera sy mpanakanto eo amin’ny tontolon’ny saripika ihany koa anefa. Manam-bady an-dRanorojaona Alice. Nanatontosa voalohany ny fampirantiana « Léternel féminin » tao amin’ny Nosy La Réunion ny taona 2004. Nezahin’i Joël Pelerin nampifandraisina sy nampifamatorina ireo olana miseho sy hitany ary iainany eo anivon’ny trano fitsaboany sy ny « art du nu » ka ireny no avoakany amin’ny saripika.